प्रेम जोडी भएको कति पछि शारीरिक सम्बन्ध राख्नु उपयुक्त ? - pnpkhabar.com
You are at:Home»स्वास्थ्य/जीवनशैली»प्रेम जोडी भएको कति पछि शारीरिक सम्बन्ध राख्नु उपयुक्त ?
प्रेम जोडी भएको कति पछि शारीरिक सम्बन्ध राख्नु उपयुक्त ?
By पूजा बानियाँ on २ फाल्गुन २०७४, बुधबार ०५:३७ स्वास्थ्य/जीवनशैली
सर्वेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो प्रेमिल जोडीका लागि पहिलो यौनसम्पर्क गर्ने उपयुक्त समय निश्चत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थियो । यो अध्ययनमा संलग्न विज्ञहरूले के निचोड निकालेका छन् भने यौनसम्पर्कको पूर्ण अधिकार प्रेमिल जोडीमै निर्भर हुन्छ । हुनसक्छ कतिपय मानिसले शारीरिक सम्बन्ध राख्नु अघि केही समय लिएर एक अर्कालाई बुझ्ने प्रयास गर्छन् । कोही भने अन्य कुरा विचारै नगरी शारीरिक सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने स्वभावका हुन्छन् ।